U-Nataliya, u-Expert Semalt, Ufaka Izenzo Eziyisisekelo ze-SEO
I-SEO iyisici esibalulekile ekukhangiseni kwe-intanethi, futhi ikhula kakhulu futhi ibe nzima nakakhulu nsuku zonke. Akekho ongathi uyakwazi konke mayelana ne-SEO ngakho ungakhathazeki ngokungazi lutho uma uqala nje. Enye into eqinisekile ukuthi noma kungcono ukuthi ukwandise iwebhusayithi yakho, ithuba elihle kufanele libhekwe kakhulu izinjini zokusesha kanye nezinzuzo zokuba khona kwe-inthanethi kwebhizinisi lakho. Ngakho-ke, yiziphi izindlela eziyisisekelo ze-SEO?
Nataliya, Semalt Ochwepheshe be-SEO, uchaza ukuthi amathegi we-meta achaza amakhasi akho kubasesho. Kudingeka babe namagama angukhiye angcono kakhulu nencazelo. Amathegi we-meta achazayo futhi aqinisekisiwe ngeke athole nje isayithi lakho elifakwe emakhasini wokuphumela enjini yokusesha (SERPs) kodwa futhi yenza kube lula ukuba ukhumbule ukuthi yiziphi izingosi zakho zakudala. Noma kunjalo, kuhle ukuphawula ukuthi izinjini zokusesha ezifana ne-Google azisebenzisi amathegi we-meta wokukhomba. Bhala amathegi ama-meta amahle kunazo zonke abantu hhayi ama-injini yokusesha. Dala amaki abafundi abazochofoza ngoba kuhlotshaniswa nalokho abakufunayo.
"Okuqukethwe yinkosi." Cishe uzwe leli gama elidumile elihlobene ne-SEO. Ingenye yemihlahlandlela yokuqala yokudala okuqukethwe okukhulu kwabalaleli bakho. Okuqukethwe okukhulu kubantu kanye nezinjini zokusesha kufanele kube ngekhwalithi ephakeme futhi ehlukile. Iheha amanye amasayithi ukuxhuma kuwe, ngakho-ke ikunika amathuba amaningi okubuyisela emuva.
Nikeza abafundi bakho lokho abakufuna ngendlela ecacile, ecacile nenembile. Akukho lutho oluzobenza bangabe besagijima baya esayithini lakho bese bebhekisela kubangani babo kuwo..Uma uthengisa imikhiqizo noma amasevisi, ukuthola abantu abaningi kusayithi lakho kuwumgomo obalulekile ophakathi. Lapho isayithi lakho lihlale licebile ekuqukethwe, leyo njongo ayike ibe enye yezinkinga zakho ezicindezelayo. Njengoba udala okuqukethwe kwakho, sebenzisa kahle amagama angukhiye. Spread amagama angukhiye ngezihloko zakho, amathegi enhlokweni, amahange, nezinye izingxenye kulo lonke ukubhala.
Ungafaka imizamo eminingi ekufundeni ukuthi ungakha kanjani izinga eliphezulu, futhi uzovuna kakhulu kulowo mzamo.
.htaccess kufanele isethwe kahle. Ungenza ukuzibeka ngokwakho noma uthole uchwepheshe ukukwenza kuwe. Uma usuqumile indlela ofuna i-URL yakho ibe ngayo, faka kulefomethi. Ungaba nama-URL kuphela noma ama-URL kuphela ukuze i-Google ingaboni amakhasi akho njengeziphindaphindiwe. Uma kwenzeka unayo amafomu amabili we-URL, i-Google ngeke ikuhlasele, kodwa kuzodingeka unikeze ngokuqondisa kabusha kusuka kuma-URL www kuya kuma-URL angekho (okulula ukukwenza). Ungasesha okuthile njengokuthi "ukuthumela izicelo kuma-URL angewona" futhi ufunde konke okudingeka ukwenze.
Udinga futhi ukulungisa ifayela lakho le robots.txt ngokufanele. Kungamangaza ukuzwa ukuthi leli fayela elincane lombhalo lingabangela ukuwa kwewebhusayithi yakho. Ifayela le-robots.txt liqondisa isikhwama se-Google namanye ama-robot emakhasini ongafuni 'ukukhwabanisa.' Uma ungafuni izithombe ukuba zifakwe ohlwini lwezinjini, usebenzisa ifayela lakho le-robots.txt ukuze uzivimbele. Ngokusobala, awufuni ukwenza iphutha lapho uhlela ifayela lakho le-robots.txt. Iphutha elilula lingavimbela ikhasi lakho lebaluleke kakhulu lewebhu bese uligcina lingenetha.
Lezi yizona zindlela ezibaluleke kakhulu ze-SEO futhi zonke zazo zihlukaniswa njengezenzo ze-SEO, futhi kukhona nezinye izindlela ezingekho emthethweni ezifana nokukhushulwa nokwakhiwa emuva kwe-backlinks . Ngokuvamile, uqala nge-SEO yesayithi futhi kamuva uzakhele ekusebenziseni izingosi ukuze wenze iwebhusayithi eqinisekisiwe ngokugcwele Source .